Filipina: Fiankohofana Amin’ny Tany Ho Fanoherana Ny Fanenana Ny Vola Ho An’ny Fampianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2011 14:21 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, Español, 日本語, Ελληνικά, Português, English
Ny fiankohofana amin'ny tany dia iray amin'ireo firehana malaza farany mamely an'ny Filipina. Nosoritana ho toy ny ” fomba fanao matory mihohoka amin'ny tany miaraka amin'ny tànana mitsotra amin'ny sisiny, hakàna ny endrika hazo fisaka” izy ity, niroso tamin'ny fanehoana ireo ny sarin'ireo mpandray anjara tao anaty aterineto izany. Tamin'ny ankapobeny dia toerana tsy dia mahazatra no nakàn'izy ireo ny sary mandry mihohohoka amin'ny tany.
Nisy fanakianana maro nifandray ny fitsilanesana mihohoka amin'ny tany amin'ny fandaminana ny andevo Afrikana teo ambonin'ireo hazo fisaka-nà sambo mpitondra andevo nandritra ny vanim-potoanan'ny varotra an-devo. Ny rodorodon'ireo mpianatra mpanao hetsi-panoherana dia nametraka ilay hetsika ho aminà habaka iray vaovao. Avy amin'ny endrika fampahoriana andevo nandritra ny taonjato faha 17, faha 18, ary faha 19, mikisaka aminà endri-panoherana feno famoronana ny fiankohofana amin'ny tany ankehitriny, izay mirotsaka amin'ny fibahanana ireo toerana malalaka sy fanoherana ny fiheverana fototra manjakazaka nentin'ny lamina ara-tsosialy momba io toerana io.
Ireo mpanao fanoherana dia nandady hanohitra ny fanapahan'ny governemanta Aquino ny teti-bola ho an'ireo anjerimanontolom-panjakana sy ireo kôlejy ary ny tsy fahampian'ny dingana matotra ho fampiatoana ny fisondrotam-bidin'ny fampianarana ary ireo sarany hafa tamin'ny fikarakarana ny “Fiankohofana Faobe Amin'ny Tany ho an'ny Zontsika amin'ny Fampianarana”. Eto ambany ny sarin'ireo mpanohitra mitsilany mihohoka amin'ny tany tao amin'ny anjerimanontolon'i Filipina izay nakarina tao amin'ny Facebook :
Tochipat avy amin'ny “misguided adventures” , na ny kirimbarimba tsy misy mpitarika, dia nilaza fa ampahany amin'ny ezak'ireo mpianatra ho fanamafisana ny fanentanan'izy ireo ity mba hampakàran'ny fanjakana ambonimbony kokoa ny vola fanampiana ny seha-pampianarana.
Ireo endrika feno famoronan'ireo mpanao fihetsiketsehana dia nila niverenan'ireo mpianatra ho fanitarana ny fanohanana ny fisolona vava azy ireo.
Indreto ny fanehoan-kevitra tamin'ny fiankohofana amin'ny tany tao amin'ny Twitter :
@plsburydoughboy: fanazarantena iray ny fiankohofana amin'ny tany. Fomba fanoherana somary kidaladala, nefa mihaiky aho fa nahare zavatra hafahafa nitranga.
@mayk_beltran: hetsika fiankohofana amin'ny tany ho an'ny fampianarana avy amin'ireo mpianatra tinyurl.com/3uvj2kg (izaho manokana mahatsapa ho efa osa amin'izany, kanefa izany no nandaniana fotoana).
@glenleonard: fomba fanoherana vaovao an'ireo mpianatra UP ny FITSILANESANA MIHOHOKA AMIN'NY TANY! hahaha farafaharatsiny sumasabay sa panahon [farafaharatsiny dia mba nampifanarahan-dry zareo tamin'ny fotoana].
@lancekatigbak: Fiankohofana Faobe Mihohoka amin'ny tany ho endrika fanoherana? Wtf
@venzie: Ireo mpianantra UP hanohy ny fanoherana ” fiankohofana amin'ny tany ” rahampitso. Yun daw yung makabagong “maty -amin'ny ” [io dia lazaina fa “fahafatesana” vaovao].
Inty misy lahatsarin'ny hetsika fiankohofana amin'ny tany avy amin'ny gazety the Pinoyweekly :….